Global Voices teny Malagasy » Manafaka anay ny fiteny Quichua · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Novambra 2019 7:50 GMT 1	 · Mpanoratra Belen Febres Nandika (en) i Belen Febres-Cordero, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Amerika Latina, Ekoatora, Fanabeazana, Fiteny, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Tantara, Teratany, Zavakanto & Kolontsaina, Ny Tetezana - The Bridge, Rising Voices
Andiana mpianatra mianatra quichua, iray amin'ireo fiteny razamben'i Ekoatera. Sary natolotra, nahazoana alalana. A group of students studying quichua, one of the ancestral languages of Ecuador. Submitted image, used with permission.
Sivy taona aho tamin'izay, nipetraka teo amin'ny latabatra lakozian'ny renibeko, namita ny enti-modiko aho indray tolakandro taorian'ny sakafo antoandro. Ny enti-mody tamin'izany dia manao sary momba ny lahatsoratra voalaza mikasika ny fomba nandevenan'ny Incas ny maty. Nanatona ireo asa akademika an-jatony nataoko nanomboka tamin'izany nanao araka izay mety indrindra aho, saingy fotoana vitsy dia vitsy no nanaovako ezaka be toy izany tahaka ny tamin'io andro io. Toy ny eritreritra, tamin'ny alàlan'ny sary nataoko, nanantena ny hanome voninahitra ny olona voalaza tamin'ny lahatsoratra aho, miaraka amin'ny kolontsaina iray manontolo izay — araka ny nolazain'ny devoara tamiko fa—efa maty koa.
Tamin'ny fianarana tantara taty aoriana, dia nampianarina momba ny fanjanahan-tany sy ny fandikana tsy marina aho. Tamin'ny mpampianatra ahy no nahalalako ny niforonan'ny Repoblikan'i Ekoadaoro, firenena nahaterahako. Nampianarin'izy ireo anay ny anaran'ireo filoham-pirenena tao Ekoadaoro ary nitondra anay nitsidika ireo fiangonana katolika tao amin'ny ivon-tanàna manan-tantara Quito, toerana naha-lehibe ahy izy ireo. Tsy tadidiko ny firesahana ny kolontsaina teratany tao anatin'ny fianarako, afa-tsy tamin'ny fotoana fohy nihaonako tamin'ilay mpanao tantara Huasipungo  raha teo am-pamaranana ny fianarako tany amin'ny lisea aho.
Hafa kosa ny zava-misy iainako andavanandro. Tena misy eo amin'ny fiainako andavanandro ny karazana fitafy, fomba amam-panao sy kolontsaina. Ambonin'izany, feno teny nindramina avy amin'ny Quichua, iray amin'ireo fiteny razamben'i Ekoadaoro  ny voambolako, sahala amin'ireo Ekoadaoreana miteny Espaniôla. Mbola milalao baolina kitra amin'ny «cancha» aho, milaza hoe ‘achachay‘ rehefa mangatsiaka aho, ary milaza ny rahavaviko hoe ‘ñaña.’ Saingy vao haingana, ho ahy manokana dia fiteny izay niara-nipetraka tamiko ny Quichua, saingy tsy tena fantatro.
“Ny fampianarana nentim-paharazana no nahatonga ny fiteny, ny fomba amam-panao, ny fahalalana, ny fijery izao hita rehetra izao, sy ny filozofian'ireo olona teratany ho tsy hita maso,” hoy i Rasu Paza Guanolema, mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina Puruhá an'ny Balda Lupaxi ao amin'ny faritany Ekoadaoreana any Chimborazo. “Manoritra anay toy ny zavatra efa lasa izy ireo saingy, na dia nisy aza ny fanilihana an-taonjato maro, dia mbola betsaka izahay ankehitriny. ”
Tadidin'i Rasu ny fisian'ny fifandraisana tsara amin'ny fampianarana fony izy nipetraka tao amin'ny vondrom-piarahamoniny. Saingy rehefa nifindra tany Quito izy mba hianatra fony izy 12 taona, dia nataon'ny mpampianatra azy ny handaozany ny Quichua, fitenin-dreniny, ary mampihatra ny fomban-drazana sy ny fahalalana mifandraika amin'ny fiteny iray manana fototra Eoropeana.
“Fotoana mahatsiravina izany”, hoy i Rasu. “Nahatsiaro norahonan'ny mpampianatro sy ny mpiara-mianatra tamiko aho satria tsy anisan'izy ireo aho. Nataon'izy ireo mazava tamiko fa tsy misy toerana ho ahy eo amin'ny tontolon'izy ireo. Nahatonga ahy hino izy ireo fa tsy manana fahaizana hianatra, ary indrindra tsy afaka mandray anjara amin'ny fampiasana ny fahalalanay manokana ireo olona ao amin'ny kolontsaina naharitra an'arivony taona. “Rehefa afaka roa taona, dia niverina tany amin'ny vondrom-piarahamoniny i Rasu ary nanomboka niasa. Rehefa feno 20 taona izy dia niverina nanohy ny fianarany tao amin'ny Kolejy Chaquiñán, izay nampianarana azy Quichua indray izy ary nasaina hirehareha amin'ny kolontsainy, ny filozofiany ary ny fiainam-panahiny. Tamin'izany no nahatonga azy ho latsa-pitiavana tamin'ny kolontsainy indray.
Mizara ny fitiavana ny fiteny sy kolontsaina
Ny fitiavan'i Rasu ny fiteny no nanosika azy hanohy hahazo mari-pahaizana oniversite amin'ny literatiora miteny espaniola. Tamin'ity indray mitoraka ity, dia afaka nifanatrika tamin'ny mpampianatra izay nanandrana azy hahatsapa fa tsy mitovy lanja amin'ny Espaniola ny lanjan'ny kolontsainy sy ny fiteniny izy.
Matetika ny fanoloran-tenan'i Rasu amin'ny fiaviany Quichua no nanosika azy hampihatra izay nianarany tamin'ny fampianarana ny fiteny, izay mpikambana ao amin'ny fianakavian'ny fiteny manana karazany ao amin'ny firenena amerikanina Tatsimo fito .
Miaraka amin'ny tanjona hampitombo ny isan'ny olona miteny Quichua any Ekoadaoro, nanatevin-daharana ny Tinkunakuy i Rasu tamin'ny taona 2008. Ity fikambanana, izay miorina ao Quito ity dia manana ny anarany avy amin'ny fotokevitry ny fifandraisana izay zava-dehibe eo amin'ny filozofian'ny tompotany Ekoadaoreana. “Raha ny fahitanay azy, dia mifandray ny olona, ​​ny natiora ary ny cosmos [izao rehetra zao], ao anatin'ny singa iray ihany isika rehetra,” hoy ny fanazavan'i Rasu. “Fifaneraserana eo amin'ny namana mifototra amin'ny fanajana izany.”
Ity no fitsipika mitarika izay nampianaran'ireo mpikambana ao amin'ny Tinkunakuy ny Quichua tamin'ireo mpianatra maherin'ny 1 000 izay nanatrika ny fampianaran'ny fikambanana tao anatin'ny 15 taona nijoroany. Mampiroborobo ny fandraisana andraikitra ara-politika, asa fampiroboroboana, ara-panahy, fanabeazana ary toekarena ihany koa ny Tinkunakuy. Mikasa hanoratra sangan'asa an-tsoratra ihany koa i Rasu mba mba hitazonana ny fampahafantarana ny fahalalana indizeny ao Quichua. “Ny tanjoko dia ny hitomboan'ny olona araka izay tratra mba hitia ity fiteny ity, ary avy amin'izany, mianatra manome lanja fomba fiainana hafa amin'ny apetrak'ity rafitra ankehitriny ity,” hoy i Rasu.
Nahatratra izany tanjona izany niaraka tamiko izy. Notiaviko hatrany ny feon'i Quichua, saingy satria nipetraka ivelan'i Ekoadaoro nandritra ny valo taona aho, dia tsy nisy ny hirika ho ahy mba hianarana ilay fiteny. Ny fiaraha-miasa tamin'ny vondrom-piarahamonina teratany vitsivitsy tamin'ny alàlan'ny tetikasa Rising Voices Reframed Stories , na izany aza, no nahatonga ny fikasako hianatra Quichua, ary, efa ho fito volana lasa izay, nahita dokambarotra momba ny fampianaran'i Rasu tao amin'ny Facebook aho, nanontaniako izy raha afaka mianatra izany antserasera aho.
Gaga aho fa nilaza izy fa afaka, ary nanana ny lesona voalohany aho ny ampitso Alatsinainy. Nanomboka teo dia niresaka tamin'i Rasu tamin'ny alàlan'ny WhatsApp nandritra ny 90 minitra isan-kerinandro aho. Nanangana Google Doc izy, ary manaraka izay nosoratany ara-potoana aho. Mampiasa e-boky misy fampiasana iarahanay manitsy koa izahay, ary mandray an-tsoratra aho.
Efa ho herintaona latsaka izay no nisy tamin'ny aterineto ny lesona Quichua. Tamin'ny voalohany, dia tsy nanana ny fahalalana ara-teknika hanaovana izany i Rasu, saingy rehefa nasaina hampianatra tany amin'ny ivo-toeram-pampianarana fiteny izy, dia nitady fampiofanana amin'ny fampiasana fitaovana nomerika. Ankehitriny dia maniry fatratra hikaroka hatrany ny fomba hahazoana mamorona raki-peo hanohanana ny fianarana ny feo izy. Mandra-pahatonga izany, dia manome mozika miaraka amin'ny tononkira amin'ny fiteny Quichua izy, izay azoko henoina rehefa manadio ny tranoko na mandehandeha aho.
“Tsara ny mahafantatra fa tsy sakana intsony ny halavirana,” hoy i Rasu, “ary izay olona liana dia afaka mianatra ny fiteny na aiza na aiza misy azy eto amin'izao tontolo izao.” Ekeko. Mianatra Quichua avy any Canada aho, ary misy ireo mpianatra manao toy izany any Etazonia sy Soeda. Amin'izany fomba izany, dia afaka mizara ny lovany ho antsika i Rasu ary azontsika atao ho antsika avy aty ivelany izany.
Na dia amin'ny teny Anglisy, fiteny tsy ahy manokana aza ny ankamaroan'ny fifaneraserako isan'andro, dia misaotra ny fampianarana Quichua fa mahatsapa ho akaikin'ny fireneko tsy toy ny teo taloha aho. Ary tsy ao Ekoadaoro an-tanandehibe naha-lehibe ahy ihany, fa ny fahalalana nentin-drazana izay tsy nifanehatra tamiko rehefa nipetraka tany aho.
Nianatra momba ny tontolo vaovao ihany koa i Catharina Blomquist, iray amin'ireo mpianatr'i Rasu, noho ny Quichua. “Avy any Soeda aho, ary Soedoà no tenin-dreniko, saingy tsapako fa ny Quichua no fiteniko,” hoy i Catharina. “Tsy haiko ny manazava ny antony.” Tadidiny fa raha sambany nitsidika an'i Ekoadaoro izy tamin'ny taona 2017, dia tsy nahalala fa nisy ny Quichua, fa raha vao nahare ilay fiteny izy dia latsa-pitia taminy ary fantany fa tokony hianatra izany izy. Nikaroka fampianarana an-tserasera izy ary nahita an'i Rasu. “Manana fomba fisainana hafa ny Quichua; fiteny izay hitako fa lalina tokoa, ”hoy ihany izy.
Manana ny lojikany manokana ny Quichua, izay manova ny fomba fahatakarantsika sy ny fonenantsika izao tontolo izao. Nianarako, ohatra, fa amin'ny Quichua “Izaho” (ñuka) dia ao anatin'ny “antsika” (ñukanchik), ary tsy afa-misaraka ireo. Azoko ihany koa fa ny fotoana sy ny habaka dia tsy azo sarahina tahaka ny pejy iray ihany koa, ary ny ho avy dia fifandimbiasan'ny lasa sy ny ankehitriny, ary ny ankehitriny no mitarika antsika. Nianarako fa azo raisina toy ny zavatra mitsidika antsika ny aretina mba hanehoana antsika fa mety tsy mifandrindra tsara ny lafiny sasany amin'ny fiainantsika, ary ny fahafatesana dia azo jerena tsy toy ny fiafarana, fa toy ny ampahany amin'ny fiverenana mandrakizay amin'ny fiainana.
Ho an'i Rasu, tsy amin'ny alalàn'ny fahatakarana lalina ny fiteny ihany no ahafahantsika mahatakatra ireo tsirinkevitra nentin-drazana tsy mila manafoana ny tena lanjan'izy ireo. Izany no antony ampifangaroany ny fampianarana io fahalalana io miaraka amin'ny lesona fitsipi-pitenenana sy voambolana. Hitany fa mahafa-po ny mahita ny fomba fanovany antsika, ny fanentanan'ny fampianarana, nisy ireo mpianatra sasany nampihatra indray ny fomban-drazana, ny fitafiana ary ireo fomba fiainana nentin-drazana izay efa nilaozan-dry zareo. Ny hafa kosa nanolo-tena hanohana ny fiteny sy ny filàn'ny olona teratany amin'ny alalan'ny habaka sy ny zavatra iainan'izy ireo manokana.
Na i Rasu aza tsy afaka mamorona hampianatra Quichua raha tsy miresaka lohahevitra toy ny vokatra maharitra nateraky ny fanjanahan-tany, izay mbola manjaka ankehitriny, ny fanavakavahana, ary ny zo momba ny tany. Ny firesahana momba ireo lohahevitra ireo dia ilaina amin'ny fanitsiana ny hadisoana ara-tantara ary tsy hanombanana izay zavatra nianarantsika ihany fa koa izay tsy nianarantsika. Manafaka antsika izany.
“Manafaka antsika amin'ny tsy hamerenana ny hadisoana taloha sy izay lazain'ny hafa antsika ny Quichua” hoy i Rasu. “Mahatonga antsika haneho ny hevitsika avy amin'ny fomba fijerintsika sy ny faravodilanitra izany, sy hanameloka ny tsy rariny, ary hiara-hiasa ho an'ny hoavy isan-karazany izay hahafahantsika miaina ao anatin'ity tontolo fotoana-habaka ity amim-pirindrana sy fifanajana eo amin'ireo olona samy hafa fiteny, ” hoy ihany izy. »Ary noho izany, dia azoko fa mameno ny banga – banga izay nisokatra efa ela ny Quichua.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/11/08/144558/
 fiteny razamben'i Ekoadaoro: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Estudios/Estudios_Socio-demograficos/Poblacion_Indigena_del_Ecuador.pdf
 firenena amerikanina Tatsimo fito: https://www.unicef.es/prensa/unicef-presenta-el-atlas-sociolinguistico-de-pueblos-indigenas-en-america-latina